Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Jabuuti – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Jabuuti
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkaasi Jabuuti.
Waxaa madaxweyne Farmaajo safarkiisa Jabuuti ku wehlin doonna ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inay dalkaasi Jabuuti kaga qeyb galaan shir maanta halkaasi uga furmaya Soomaaliya iyo Somaliland, kaasi oo uu shir guddoomin doonno madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dhinaca kale, wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna la filayaa inay maanta gaaraan magaalada Jabuuti.
Madaxda kale ee shirkaasi lagu casuumay ayaa waxaa ka mid ah ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo wakiilo ka kala socda urur goboleedka IGAD, Midowga Africa iyo Midowga Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in shirka uu furmo, waxaana illaa iyo haatan la ogeyn waxyaabaha shirkaasi looga hadli doonno, balse shirkaas ayaa qeyb ka ah wada-hadalo labada dhinac hore u dhex-maray.